'मैले गर्नै सक्दिन' भन्ने मानसिकतालाइ कसरी हटाउने ? - ज्ञानविज्ञान
‘मैले गर्न सक्दिन’ भन्रे मानसिकताले जित्याे भने मान्छे जिवनमन जहाँकाे त्पाहीँ रहन्छ ।
सबैभन्दा पहिले त आफ्नाे लक्ष्य सम्झिनुहाेस् । व्याक्ति अरूले दिएकाे प्रेरणाले हाेइन, आफुभित्रकाे उत्प्रेरणाले अगाडी बढ्छ । त्यसैले आफ्नाे लक्ष्य र याेजनालाइ पल्टाएर हेर्नुहाेस् ।आफ्ना क्षमता र कमजाेरीहरू टिपाेट गर्नुहाेस् । ती क्षमतालाइ तपाइले कसरी प्रयाेग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना कमजाेरीलाइ कसरी सुधार्न सकिन्छ, कसरी ती कमजाेरीलाइ आफ्नाे क्षमताले जित्न सकिन्छ भन्रे बारेमा डायरीमा नै लेख्नुहाेस् ।
आफुले अहिलेसम्म कुनकुन चुनाैतीकाे सामना गरे, अफ्ठ्यारा लागेका कुन कुन काम गर्न सफल भए भन्ने सम्झनुहाेस् । ती चुनाैतिकाे सामना गर्दा तपाइले कुन तरिका अपनाउनुभएकाे थियाे, तपाइलाइ कुन कुन कुराले सहयाेग मिल्याे स्मरण गर्नुहाेस् ।आफुले गर्नुपर्ने काम या आएकाे चुनाैतिलाइ एकै पटक गर्ने नगर्नुहाेस् ।
त्यसकाे लागी चाहिने आधार निर्माण गर्नतिर लाग्नुहाेस् । पुर्व तयारी गर्न तिर लाग्नुहाेस् । पुर्व तयारीले तपाइले सम्भावना देख्न थाल्नुहुनेछ। पुर्वतयारीमा त्याे कामकाे बारेमा इन्टरनेट, पुस्तक या अन्य माध्यमबाट अध्ययन गर्नु, सम्बन्धित व्याक्तिहरूकाे सुझाव सल्लाह लिनु पनि पर्दछ ।
जाे काेही पनि कामलाइ एकै पटक एउटा पहाडकाे रूपमा लिन थाल्याे भने पहिल्यै अत्तालिन्छ । त्यसैले गर्नुपर्ने कामलाइ सानाे-सानाे भागमा बाड्नुहाेस् । ति काम एक पछि अर्काे गर्दै गरेर अगाडी बढ्नुहाेस् । सुरूकाे एउटा सानाे काम बन्याे भने पनि तपाइमा आत्मविश्वास र उत्साह बढ्छ ।
फर्केर हेर्नुहाेस्, तपाइ कहाँ हुनुहुन्थ्याे र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ? याे यात्रा तपाइले यत्तिकै पुरा गर्नुभएकाे हाेइन । तपाइकाे निरन्तरता, गल्ति पछि सिकेकाे पाठ र अनुभवहरूले यहाँ सम्म आइपुग्नुभएकाे हाे । र, अबकाे यात्रा पनि त्यही अनुभवकाे आधारमा आत्मविश्वासका साथ तय गर्नुहाेस् ।
स्मरण शक्ति कसरी बढाउने !
मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा स्मरण शक्ति बिस्तारै कमजोर बन्दै जान्छ । विकासक्रमको अनुसार व्यक्तिको उमेर ढल्दै जाँदा खासगरी वृद्ध अवस्थामा स्मरण शक्तिमा ह्रास हुनु स्वाभाविक हो । मानिसको सम्पूर्ण ज्ञान, सीप, विचार, आचरण, हरेक कार्य, व्यक्तिगत पहिचान तथा व्यक्तित्व आदि सबै कुरा स्मरण शक्तिमा निर्भर रहन्छ ।
स्मरण शक्तिविना मानिसको सम्पूर्ण अनुभव निरर्थक हुन्छ । विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार व्यक्तिको स्मरण शक्तिको गहिरो सम्बन्ध उसको इच्छा, चाहना तथा रुचिसँग रहेको हुन्छ । एकाग्रतामा कमी भएपछि व्यक्ति कुनै पनि क्रियाकलापहरू जस्तै पढ्न, लेख्न, कुनै नौलो कुरा सिक्न, हिसाब गर्न, राम्ररी सक्दैनन् ।
स्मृतिका तीन क्रियाहरू हुन्छन्– अङ्कन (एन्कोडिङ), धारणा (रिटेन्सन) तथा पुनःस्मरण (रिकल) मा कुनै त्रुटि भएमा स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ । स्मृतिलोपलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
(१) सामान्य विस्मृति
उमेर ढल्कँदै गएमा मानिसको स्मरण शक्ति पनि केही मात्रामा घट्दै जान्छ । यसले मानिसको दैनिक जीवनमा खासै असर गर्दैन ।
(२) बिर्सने रोग (एम्नेसिया)
यस्तो रोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना, बार, गाउँ आदिजस्ता कुराहरू बिर्सन सक्छ ।
बिर्सिने रोगका लक्षण
यस रोगको लक्षणमा कसैको नाम ठेगाना बिर्सिनु । केही दिनअगाडि भए–गरेका कुराहरू बिर्सिनु । पढेका, देखेका, सुनेका कुराहरू याद नआउनु । कुनै ठाउँमा सामान राखेर बिर्सिनु । नयाँ कुराहरू जस्तैः भाषा, सङ्गीत, गायन, नृत्य, अभिनय कला आदि सिक्न गाह्रो हुनु । पढेर याद राख्ने इच्छा नहुनु । कुनै पनि कुरा एकपटक भन्दा नबुझ्नु, अरुचि, आलस्य, चिडचिडापन, निराशाको भाव, घबराहट आदि हुन्छ ।
प्रख्यात मेमोरी विज्ञ एवम् अनुसन्धानकर्ता मनोविद् डा. एलिजावेथ लोफ्टसका अनुसार बिर्सनुका चारवटा मुख्य कारण हुन्छन् । उहाँले उल्लेख गरेअनुसार –
(१) स्मृति पुनःप्राप्तिमा असफलता
के तपाईंले कहिल्यै यस्तो महसुस गर्नुभएको छ कि केही जानकारी तपाईंको सम्झनाबाट हराइसकेको छ ? वा हुन सक्छ, तपाईंलाई थाहा छ, यो त्यहाँ छ । तर, तपार्इंले यो फेला पार्न सक्नुहुन्न । एक स्मृति पुनः प्राप्त गर्न असमर्थता बिर्सनुको सबैभन्दा साधारण कारणहरूमध्ये एक हो ।
यस सिद्धान्तका अनुसार, प्रत्येकचोटि नयाँ सिद्धान्त गठन हुँदा मेमोरी ट्रेस सिर्जना हुन्छ । क्षय सिद्धान्तले सुझाव दिन्छ कि समयको साथ, यी मेमोरी ट्रेसहरू फिका र हराउन थाल्छन् । यदि जानकारी पुनः प्राप्त र पूर्वाभ्यास गरिएको छैन भने यो अन्ततः हराउनेछ ।
अर्को सिद्धान्त हस्तक्षेप सिद्धान्त हो । केही सम्झनाहरू प्रतिस्पर्धा र अन्य सम्झनाहरूसँग हस्तक्षेप । जब जानकारी अन्य जानकारीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, जुन पहिले मेमोरीमा भण्डार गरिएको थियो, हस्तक्षेप हुने बढी सम्भावना हुन्छ ।
दुईवटा आधारभूत प्रकारका हस्तक्षेपहरू हुन सक्छन् ।पूर्व अधिग्रहण हस्तक्षेप तब हुन्छ, जब नयाँ अधिग्रहीत जानकारी पुरानो सम्झनामा हस्तक्षेप गर्छ ।सक्रिय हस्तक्षेप तब हुन्छ, जब पुरानो जानिएको जानकारीले नयाँ यादहरू बनाउन कठिन बनाउँछ ।
(३) भण्डारण गर्न असफल
एन्कोडिङ विफलताले कहिलेकाहीँ सूचना लामो अवधि मेमोरीमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ । कहिलेकाहीँ, सूचना गुमाउनु भनेको बिर्सनुको साथै कम र अधिक गर्न यो तथ्य हुन्छ कि यसले यसलाई कहिल्यै लामो अवधिक मेमोरीमा पहिलो स्थानमा बनाउँदैन ।
(४) बिर्सन प्रेरित भएर बिर्सने
कहिलेकाहीँ हामी सक्रिय रूपमा सम्झनाहरू बिर्सने गर्छौं । विशेषगरी ती दुःखद वा कष्टदायी घटनाहरू वा अनुभवहरू, पीडादायी सम्झनाहरू निराश र चिन्ताजनक हुन सक्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी यसलाई मेटाउन चाहन्छौँ ।
स्मरण शक्ति बढाउन के गर्ने ?
तपाईंको पूर्ण बौद्धिक क्षमतामा पुग्न र मस्तिष्कको स्वास्थ्य सुधार गर्न निम्नतरिका अपनाउन सकिन्छ ।
(१) खानपानमा ध्यान दिने
दैनिक शरीरलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानी पिउने । खानेकुरामा कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानाको अभावले दिमागको क्षमता, ऊर्जा र मुड परिवर्तन गर्नुका साथै स्मरणशक्ति र श्रवण शक्तिमा पनि नकारात्मक असर पु¥याउँछ । जङ्क फुड अधिक मात्रामा खाँदा, फ्राई खानेकुरा खाँदा, बढी चिल्लो खाँदा, चुइङ्गमले पनि हाम्रो श्रवणशक्ति र स्मरण शक्तिमा ह्रास ल्याउने गर्छ ।
नुनले हृदयको चाल र रक्तचापलाई असर गर्नका साथै दिमाग र समग्र स्मरण शक्तिलाई असर गर्छ । चिनीको प्रयोग बढी गर्नाले पनि स्मरण शक्ति, सिक्ने क्षमता र श्रवण शक्तिमा ह्रास आउने गर्छ । चिया, कफी तथा धूमपानबाट टाढा नै बस्नु राम्रो । नशालु पदार्थ नखाने र मद्यपान नगर्ने ।
सन्तुलित पौष्टिक खाना नियमित समयमा खाने । मौसमअनुसारको फलफूल तथा तरकारीहरू खाने । अण्डा, माछा, दूध, दही, मही, चीज, मख्खन खाने । खानपानमा ध्यान दिन नसक्दा स्मरणशक्ति घट्दै जान्छ भनेपछि गएर विभिन्नप्रकारका मनोविकारहरू जस्तै, अल्जाइमर, डिमेन्सिया, डिप्रेसन र एन्जाइटीसमेतको जोखिम बढाउन सक्छ ।
(२) नियमित शारीरिक व्यायाम
नियमित व्यायाम गरेर वा घरका विभिन्न कामहरू गरेर स्मरण शक्तिलाई यथावत् राख्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन तथा दिमागमा रक्षात्मक प्रभाव सिर्जनाका लागि शारीरिक व्यायाम नै सबैभन्दा राम्रो र सजिलो उपाय हो । दैनिक शारीरिक व्यायामअन्तर्गत प्रातः भ्रमण, साइक्लिङ, पौडी खेल्नेलगायतका शरीर चल्ने व्यायामलाई लिइएको छ ।
आफ्नो समयअनुसार बिहान बेलुकी घुम्ने । शारीरिक सक्रियताले स्मरण शक्तिमा कमी आउन नदिन विशेष भूमिका खेल्छ साथै योगाभ्यास मेडिटेसन (ध्यान) अनुलोम बिलोम, कपालभाँती गर्दा पनि सहयोग मिल्छ ।
(३) सकारात्मक सोच
सकारात्मक सोच राख्ने र नकारात्मक संवेगलाई आफूमा हाबी हुन नदिने । याद राख्ने कुरामा गहिरो रुचि लिएर एकाग्रता भएर पूरै मन लगाएर याद गर्ने । एकपटकमा एउटा कुरा याद गर्न प्रयास नगर्ने, कुनै कुरालाई क्रमअनुसार याद गर्ने । त्यसलाई प्रत्येक २४ घन्टामा फेरि दोहो¥याउने । स्मरण शक्तिको विषयलाई लिएर सधै चिन्तित नहुने साथै रेडियो, टेलिभिजन एवम् पत्रपत्रिकाका ‘मेमोरी पावर’ बढाउने औषधि विज्ञापनको भर नपर्ने ।
(४) पर्याप्त निद्रा
व्यक्तिले मानसिक रूपमा स्वस्थ एवम् फुर्ती अनुभव गर्न दिनमा कम्तीमा ७ देखि ८ घन्टा सुत्ने गर्नु राम्रो मानिन्छ । अपर्याप्त निद्राले मन अस्थिर हुन्छ । दैनिक गतिविधिमा असर गर्छ । स्मरण शक्ति विकासका लागि राति अबेरसम्म जागेर नपढ्ने, राम्रोसँग निद्रा नपर्नुका धेरै कारण हुन सक्छन् जस्तैः मनमा पीर चिन्ता पर्नु, केही कुराको डरले सताउनु, कार्यालयमा तनाव वा धेरै कामको बोझ हुनु, अपर्याप्त निद्रा र थकानको कमी आदि ।
कहिलेकाहीँ निद्रा नपर्नुमा प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवसिर्जित दुर्घटना, विनाश वा नजिकका व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ । पर्याप्त नसुत्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्छ । डिप्रेसन, डायबिटिज, मुटुसम्बन्धी रोग, डिमेन्सिया निम्त्याउँछ । गुणस्तरीय निद्राले व्यक्तिहरू, विद्यार्र्थी र धावकको प्रस्तुतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । पर्याप्त गुणस्तरीय निद्राले दिमाग फुर्तिलो बनाउँछ, ऊर्जामा तीव्रता दिन्छ, स्मरण शक्ति बढाउँछ ।
पर्याप्त निद्राले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । स्वस्थ सेल डिभिजनलाई प्रोत्साहन गर्छ । शारीरिक शक्ति वृद्धि गर्छ । दिमागको कार्यमा सुधार ल्याउँछ । हर्मोन प्रणालीले राम्रो काम गर्छ । तनाव हटाउँछ र नकारात्मक आवेग घटाउँछ ।
ध्यानको अभ्यासले हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्छ । पछिल्ला वर्षमा मनोवैज्ञानिक मानसिकता र मध्यस्थतावरिपरिको केही पुरानो ज्ञानमा बढी चासो देखाएका छन् । ध्यान गर्ने तरिकाहरू व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छन् तर ती सबैमा स्मृतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
(६) सानै उमेरदेखि मानसिक गतिविधिको उच्चस्तर राख्नुहोस्
अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरू प्रायः दिनमा आफैँ पढाउँछन् । ती बच्चाहरूको उच्च आईक्यू हुन्छ । चार वर्षको उमेर वा त्यसभन्दा कम उमेरदेखि मानसिक गतिविधिको उच्चस्तरको प्रयोग केही वर्षसम्म गरेर तपाईं आफ्नो बच्चाको बुद्धिमत्ता (आईक्यू) चार पोइन्टले बढाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंको बच्चासँग जति धेरै कुराकानी हुन्छ, त्यति नै उनीहरू बुद्धिमानी हुन्छन् ।
साधारण खेलहरूले वस्तुको नामकरण र सानो पजलहरू सँगै समाहित गर्ने, सामाजिक र शैक्षिक विषय बनाएर, बच्चाको बुद्धिमा सुधार गर्दछ । बच्चासँग कुरा गर्दा तिनीहरूको शब्दावली बढ्छ । यो उनीहरूको सामान्य बुद्धि स्तरका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
न्युरोसाइजिस्टद्वारा लामो समयदेखि गरेको अध्ययनले रमाइलो गतिविधि जस्तैः शब्दकोश, सुडोकु, चेसले व्यक्तिको संज्ञानात्मक क्षमताको सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।
(७) शिक्षा विस्तार गर्नुहोस्
आफैँले पहिले बेवास्ता गर्दै आएका जटिल कार्यहरू जस्तैः अप्ठ्यारो पाठ्यक्रम, दोस्रो भाषा सिक्नु, असजिलो किताब पढ्ने ती सबै समस्या समाधानको सक्रियताका साथ हरेक दिन सिक्ने र बच्चालाई पनि समान काम गर्न सिकाउने ।
धेरै देशमा जोखिममा रहेका बच्चालाई गहन प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान गर्न शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमले केही हदसम्म शैक्षिक उपलब्धि गरिरहेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा बच्चाको सामान्य बौद्धिक क्षमता सुधार गरेको देखाइएको छैन । यी कार्यक्रमले बच्चाका लागि एक राम्रो उत्तेजक वातावरण प्रदान गर्छ । उनीहरूको शैक्षिक अनुभव तीव्र बनाउँछ ।
(८) धूमपान छाड्नुहोस्
धूमपान नगर्नु तपाईंको दिमागको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न सक्ने एउटा पहिलो कदम हो ।
(९) राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु
स्मृतिको एउटा विशेष प्रकार जुन हामीले सबै प्रकारको सम्बन्धमा अभ्यास गर्छौं, जुन ट्रान्सेक्टिभ मेमोरी भनेर चिनिन्छ । यो अवधारणा पहिलोपटक मनोवैज्ञानिक डानियल वेग्नरले १९८५ मा विकसित गरेका थिए ।
Don't Miss it यस्ता छन् कहिलेकाही खुट्टा निदाउनुका कारणहरू, जान्नुहाेस्
Up Next यस्ता ३ कुरा जसले तपाईलाई जिवनमा असफल बनाउन सक्छन्, जान्रुहाेस्
बिहान उठ्ने बितिकै दैनिक एक लिटर पानी पिउने बानी गर्नुहाेस् यस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ
बिहान उठेपछि एक लिटर पानी दैनिक पिउने बानी गर्नाले अनेकौं रोगबाट छुट्कारा पाउन सहयोग मिल्छ । मानिसको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन…
यस्तो गर्नुहोस्, जाडो मौसममा चाडै कम हुन्छ शरिरको तौल
ज्वानोको चिया गरम पानीमा ज्वानो, अलैंची, सुप र अदुवा हालेर उमाल्नुहोस् । यो चियामा राइबोफ्लेविन नामक तत्वको मात्रा हुन्छ ।…